samedi, 21 mars 2020 12:46
21 mars: Journée Mondiale de la Trisomie 21.
samedi, 21 mars 2020 12:44
samedi, 21 mars 2020 12:39
21 mars: Journée Internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
samedi, 21 mars 2020 12:19
Coronavirus: Nikatona ny Fiangonana Advantista eto Sambava Centre
Filazana amin’ny tabilao « Mifody ny Eglisy niany » no nitsena ny mpino ato amin’ny Fiangonana Advantista Sambava Centre androany marainan’ny sabotsy 21 marsa 2020 fa samy manao fotoam-pihavavahana any an-tokatranony avy, ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus.
samedi, 21 mars 2020 12:13
Solika: Ampy tsara amin’ny filana isan’andro ny solika eto Madagasikara, hoy ny OMH
Nanao fampandrenesana ny vahoaka ny OMH (Office Malgache des Hydrocarbures) fa milamina sy mirindra tsy misy ahiana ny famatsiana solika ny nosintsika nanomboka ny faran’ny taona 2019.
Maharitra antsika amam-bolana ny tahiry azo amin’ireo solika vao nafarana, ary ampy tsara amin’ny filana isan’andro ny solika eto Madagasikara. Mbola betsaka ny tahiry fiandry mitoby ao Toamasina ankotran’ireo solika vao tonga tamin’ny herinandro lasa iny.
Feno tanteraka amin’izao fotoana Ireo toby fitahirizana roa lehibe eto Antananarivo (Alarobia sy Soanierana). Ny vokatra taterina isan’andro avy any Toamasina dia betsaka noho ny filan’ny renivohitra sy ny manodidina, hoy hatrany ny fanazavana.
Mizotra an-tsakany sy an-davany ihany koa ny famatsiana ireo toby maro hafa manerana ny Nosy.
Manome vahana ny fiparitahan’ilay otrik’aretina “coronavirus” ny fitangorongoronana hoy ny fanentanana ataon’ny OMH.
samedi, 21 mars 2020 12:10
« Tagnamaro : Andron’ny olom-pirenena » : Nofoanana ny hetsika tokony natao manerana an’i Madagasikara
Nofoanana ny « Tagnamaro : Andron’ny olom-pirenena » fanao isaky ny sabotsy fahatelo amin’ny volana tokony natao manerana an’i Madagasikara ho fampiharana ny fepetra noraisin’ny fanjakana taorian’ny nanambaran’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, fa misy olona telo voamarina fa voan’ny coronavirus eto Madagasikara.
samedi, 21 mars 2020 11:04
Coronavirus: Ahoana ny karaman'ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina
Iarahan'ny rehetra manaiky ny fepetra anakatonana mandritra ny 15 andro farahafakeliny ny sekoly rehetra manerana ny Nosy.
Velom-panontaniana kosa ireo mpampianatra any amin'ny sekoly tsy miankina, iza no andoa ny karaman'izy ireo, andoa sara-pianarana ihany koa ve ny Ray amandrenin'ny mpianatra, ho zakan'ny sekoly ve ny hiantsoroka irery izany, nefa etsy andaniny tsy maintsy mandoa ny hofatrano, ny jiro sy rano ary ireo kojakoja maro na misy fianarana na tsy misy.
samedi, 21 mars 2020 10:55
Mahajanga: Mirohotra mamonjy pharmacie ny olona
Tranga miseho eto Ambohimandamina Mahajanga izao maraina rehefa nandre ny olona fa efa eto Madagasikara ny valanaretina coronavirus, ary vehivavy miisa telo no voamarina fa voa.